Dagaalo iminka ka socda Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaalo iminka ka socda Muqdisho
Muqdisho (keydmedia) Waxaa iminka ka soconaya Magaalada Muqdisho dagaala hubeysan oo u dhaxeeya dhinacyada ku dagaalamaya gudaha magaalada muqdisho, waxaana iminka xabada ay ka dhaceysaa agagaarka degmada Boondheere.
Dagaalka oo laba waji ahaa ayaa waxaa uu kiisii hore ka bilowday degmada Boondheere meel ku dhaw wasaaradii hore ee arimaha gudaha, waxaana la warinayaa in dagaalka ay ku dhinteen ilaa iyo hada ay ku dhinteen 4 ruux oo rayid ah ayna ku dhaawacmeen tira intaas ka badan.
Dagaal ka dhacay degmada Hodan ayaa saameyn balaaran ku yeeshay isu-socodkii gaadiidka ka soo baxa suuqa Bakaaraha ee u kala goosha degmooyinka La dagan yahay ee gobalka Banaadir iyo duleedka magaalada Muqdisho.
Xabada ayaa bilaabatay saacada kooban kadib markii Cali Dheere oo ka tirsan Afhayeenada kooxaha Dowlada ka soo horjeeda uu daboolka ka qaaday dagaal ka bilaabanaya maanta oo ay la galayaan Dowlada iyo kooxaha ka soo horjeeda.
Dadka ku nool Muqdisho ayaa xiligan oo la joogo waqtigii afurka waxa ay yihiin kuwa aad uga walaacsan natiijada ka dhalan karta dagaaladaasi iminka socda iyo hanjabaadaha joogtada ah ee ay labada dhan hawada isu marsiiyaan, waxaana hadalka Cali dheere ka horeeyay C/rashid xidig oo dowlada ka tirsan kaas oo ka dhawaajiyay bisha Ramadaan dhexdeeda Dowlada ay is balaaranin doonto.